कतै तपाईंको मोबाइल दर्ता छैन ? छैन भने अनलाइनबाटै यसरी गर्नुहोस्, नत्र जेठदेखि बन्द होला - Muldhar Post
मूलधारपोष्ट २०७७, २४ फाल्गुन सोमबार 146 पटक हेरिएको
आउँदो जेठ महिनादेखि नेपालमा अवैध मोबाइल नचल्ने भएका छन् । त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडानको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन विगत साढे चार वर्षदेखि इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा नेपालभर सञ्चालनमा रहेका मोबाइल फोनको आईएमईआई दर्ता, सम्पूर्ण मोबाइल अपरेटरको सिम कार्ड दर्ता, आईएमईआई राखिएका अन्य डिभाइस दर्तालगायत कार्य भइरहेकाे छ । योसँगै नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल आउँदो जेठ महिनादेखि बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । यसकारण मोबाइलको आईएमईआई दर्ता अनिवार्य भएकाे छ । हामी यहाँ तपाईंहरूका लागि मोबाइलको आईएमईआई नम्बर हेर्नेदेखि दर्ता गर्ने सम्मको प्रक्रियाकाे बारेमा बताउँदै छौं ।
यसरी पत्ता लगाउनुहाेस् आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर-आफ्नो मोबाइल दर्ता गर्नुअघि सुरुमा आईएमईआई नम्बर कति हो भन्ने कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ । आधिकारिक रुपमा भित्रिएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर आयताकर्ता कम्पनीले सुरुमै दर्ता गरेर भित्र्याएका हुन्छन् । विदेशबाट उपहारको रुपमा आउने तथा व्यक्तिगत रुपमा किनेर ल्याइएका र अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलकाे आईएमईआई नम्बर भने दर्ता भएको हुन्न । नेपालमै किनेका कतिपय मोबाइलको पनि आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको हुनसक्छ ।
अझ पुराना फोनको त आईएमईआई नम्बर दर्ता भएकै छैन । किनभने, प्राधिकरणले आईएमईआई दर्ता गर्न थालेको जम्मा साढे तीन वर्ष भएको छ । त्यसैले आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर पत्ता लगाएर दर्ता गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । यसका लागि मोबाइल प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा ‘*#06#’ डायल गरी आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर हेर्न सक्नेछन् । यदि मोबाइलले एउटा मात्र सिम सर्पोट गर्ने हो भने एउटा मात्र आईएमईआई नम्बर देखाउँछ । यदि दुई वटा सिम लाग्छ भने दुईवटा आईएमईआई नम्बर हुन्छन् । यदि दुईवटा छ भने प्राधिकरणमा दुवै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आईएमईआई नम्बर दर्ता भए/नभएको कसरी थाहा पाउने ? दर्ता गराउनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने थाहा पाउनका लागि तपाईंको मोबाइलकाे आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको सिस्टमा दर्ता भए नभएको पत्ता लगाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सुरुवमा यो लिंकमा क्लिक गर्नुहाेस् । यसमा ‘नो योर डिभाइस’ भन्ने अप्सन दिइएको छ । उक्त अप्सनमा गएर गएर तपाईंले आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर हाली दर्ता भए/नभएको थाहा पाउन सक्नुहन्छ ।
आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने पक्रिया-यदि तपाईंको मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भएको छैन भने त्यसलाई अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नका लागि यो लिंकमा गएर सुरुमा साइनअप गुर्नस् । साइनअप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ ‘न्यु इम्पोटर’ र ‘इन्डिभिजुअल एप्लीकेशन’ अप्सन देख्नुहुने छ ।
इन्डिभिजुअल एप्लिकेशनमा क्लिक गरी भित्र जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ तपाईंलाई एउटा फर्म प्राप्त हुने छ । उक्त फर्ममा आवश्यक जानकारी भर्नुहाेस् । साथै सरकारबाट उपलब्ध गराइएको कुनैपनि एउटा आधिकारिक परिचयपत्रको स्क्यान कपी पनि बुझाउनुहाेस् । यति भएपछि उपलब्ध जानकारीका आधारमा प्राधिकरणले अध्ययन गरी दर्ता गर्नेछ । व्यवसायिक आयातकर्ताको हकमा भने, सुरुमा टाइप अप्रुभल आवश्यक पर्छ । टाइप अप्रुभल लिएपश्चात उनिहरुले ल्याउन लागेको डिभाइसको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
आईएमईआई नम्बर अपलोड भएसँगै प्राधिकरणमा निवेदन दिन सकिन्छ । उक्त निवेदनको आधारमा आईएमईआई नम्बर मान्य छ वा छैन, सिस्टममार्फत जाँच हुन्छ । सबै कुरा मिले पश्चात मात्रै प्राधिकरणको स्टिममा आईएमईआई नम्बर दर्ता हुन्छ । यदि अनलाइन दर्ता प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या वा थप जानकारी आवश्यक भए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पर्क नम्बर ०१-४२५५४७४ मा फाेन गर्न सकिन्छ । (यसैबीच समाचारमा उल्लेख गरिएको लिंक https://eir.nta.gov.np/ अहिले सर्भर डाउनका कारण खुल्न नसकेकको र केही समयमै पुनः वेबसाइट सुचारु हुने जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।